Buug Faransiiska ku faafay oo lagu sheegay in 'CIA-da ay ka dambeysay qaraxyadii 9/11' - BBC News Somali
Buug Faransiiska ku faafay oo lagu sheegay in 'CIA-da ay ka dambeysay qaraxyadii 9/11'
Image caption Ku dhawaad 3,000 oo ruux ayaa lagu dilay weerarkaas oo lagu fuliyay 4 diyaaradood oo ay Al-Qaacidda afduubatay
Madbacad ku taalla waddanka Faransiiska ayaa raalligalin bixisay ka dib markii buug maaddada taariikhda lagu baro ardayda Iskuullada dalkaas lagu arkay jumlad lagu sheegayo in weerarkii daaraha mtaanaha ee Mareykanka lagu qaaday 11-kii bishii September, 2001-dii "ay abaabushay hay'adda sirdoonka ee CIA-da".
"Jumladdan waxay qeexeysaa sheekooyin qarsoodi ah oo aan xaqiiqda ku saleysneyn, loomana baahneyn inay soo muuqato. Ma aha qoraal ka turjumaya waxa ay tifaftireyaasha madbacadda iyo qorayaasheeda aaminsan yihiin", ayaa lagu yiri bayaan ku qornaa luuqadda Faransiiska.
Image caption Usaama Bin Laadin wuxuu ka mid ahaa dadka ay sida weyn u doon-dooneysay FBI-da Mareykanka
Bogga 204-aad ee buugga ayuu qoraagu ku sharraxay mowduuca ku saabsan sida loo abuuray ururka jihaad doonka ah ee la magac baxay al-Qaacida iyo "habkii uu u dhacay weerarkii 11/9 2001 lagu qaaday daaraha New York iyo Washington".
"Dhacdadan caalamka oo dhan laga arkayay - wuxuusan shaki ku jirin inay qorsheeyeen (laamaha sidoonka) ee hay'adda CIA-da, ujeeddadooduna ma waxay ahayd inay saameynta Mareykanka ku fidiyaan gobolka Bariga dhexe? - Waxaa Mareykanka laftiisa lagu waxyeelleeyay caalamaddii uu isaga sameystay".
Afhayeenka boggaas ayaa wargeyska Le Monde u sheegay in "islamarkiiba ay arrintu cirka isku shareertay".
Wuxuu wargeyskan sheegay in daraasad la sameeyay bishii December ee sanadkii 2018-kii ay muujisay in 21% ka mid ah dadka ay da'doodu ka hooseyso 35 sano ay aaminsan yihiin in Mareykanku uu si uun ugu lug lahaa fulinta weerarkaas, buugganina hadda dadka loogu talagalay ay yihiin kuwa da'daas ah.
In ka badan 19 sano ka dib markii ay 19 qof oo ka tirsan al-Qaacidda ay diyaarado lasoo afduubay ku qarxiyeen daartii ganacsiga adduunka, daartii gaashaandhigga Mareykanka iyo barxad ku taalla gobolka Pennsylvania, waxaa isbuucan la filayaa inuu maxkamad milatari oo Mareykan ah kasoo muuqdo nin loo heysto mas'uuliyadda qaraxyadaas.